Jowhar.com : Somali Leader News - News: Kulan u dhaxeeyay Barre Hiiraale iyo odayaal dhaqameedyo oo fashil ku dhamaaday
April 24 2014 22:16:34
Kulan u dhaxeeyay Barre Hiiraale iyo odayaal dhaqameedyo oo fashil ku dhamaaday
Kulan u dhaxeeyay Col Barre Hiiraale iyo Gudi ka koobnaa odayaal iyo waxgarad ku heyb ah oo shalay ka dhacay deegaanka Goobweyn ee duleedka Kismaayo ayaa ku dhamaaday natiijo la'aan.
Sida ay sheegayaan wararka Gudiga oo uu diray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed si ay ugu qanciyaan Barre Hiiraale inuu soo dabco, hubkiisana ku wareejiyo Ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inuu ka biya diiday.
Col. Barre Hiiraale ayaa si cad ah u sheegay inuusan aqbali karin inuu hubkiisa dhigo oo uu Axmed Madoobe isku dhiibo, isagoo cadeeyay in taasi uu ka xigo dagaal sida uu yiri.
Qaar ka mid ah Odayaashii la kulmay Barre Hiiraale ayaa ku wargeliyay in uusan go'doon is gelin, isla markaana aan loo arag nabad diid, kadib hadalkii ka soo yeeray Wakiilka IGAD u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey.
Odayaasha ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo, iyagoo faro baran oo aan wax natiijo ah ka gaarin, waxaana tani la ogeyn go'aanka ay dowladda ka qaadan doonto, maadaama dadaaladii la waday oo dhan ay noqdeen kuwo fashilmay
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo muddo todobaad ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa waday dadaalo uu isugu keenayay Axmed Madoobe iyo dhinacyadii la dagaalamay, waxaana baaq uu Ra'iisul Wasaaruhu u diray Barre Hiiraale uu ku gacan seyray.
master on April 21 2014
Jowhar.com751,337 unique visits